ICP: Switch Control Power sy ny mampiavaka azy | Fanavaozana maintso
Betsaka ny fomba fitehirizana sy fitantarana ny jiro ampiasaintsika ao an-trano. Iray amin'izany ny ICP fantatra amin'ny hoe jiro fanaraha-maso herinaratra. Izy io dia fitaovana napetraka ao an-trano izay ampiasaina hanapahana ny famatsiana rehefa mihoatra ny fehezanteny nifanarahana ny herinaratra. Matetika izy io dia mitranga rehefa misy fitaovana elektrika marobe mifandray amin'ny fotoana iray ary tsy afa-miala amin'ny famatsiana ny filan'ny herinaratra ny herinaratra nifanarahana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zava-drehetra ilainao ho fantatra momba ny jiro fanaraha-maso herinaratra ICP sy ny toetrany.
2 Ahoana ny fiasan'ny ICP
3 Tsy maintsy atao ve ny ICP?
Ity karazana rafitra fanaraha-maso ity dia natsangana ho an'ny trano izay latsaky ny 15 kW ny herin'izy ireo. Fantatray fa ny fahatapahan'ny famatsian-drakitra halo dia vetivety ihany satria azo averina io raha hitanao fa ampifandraisinay ireo fitaovana elektrika izay mahatonga ny herinaratra nifanarahana. Vantany vao novonoinay ireo fitaovana nampiasaintsika loatra, dia azo ampiasaina indray toy ny mahazatra ny herinaratra.
Ny ICP dia miorina amin'ny tontonana fanaraha-maso ankapobeny izay misy ny sisin'ny rafitra hazavana. Ny mpampiasa manana famatsian-jiro dia tokony hahafantatra ny toerana misy ny ICP amin'ny fotoana rehetra. Raha mihoatra ny herinaratra nifanarahana dia tsy maintsy ampandehanana indray ny fitaovana hamerenana ny herinaratra ao an-trano. Matetika ny fianakaviana fantatr'izy ireo ny hery nifanarahana ary tsy mihoatra ny mahazatra izany. Na izany aza, misy fotoana sasany izay mifanojo fa fitaovana maro no nokaoka izay nampiasa herinaratra be dia be tamin'ny fotoana iray ary lasa mandeha ny mandeha ho azy.
Ny orinasan-tserasera isaky ny faritra dia manova ny metatra analog ho an'ireo nomerika, izay midika fa tafiditra ao anaty fitaovana elektrika ny ICP.
Ahoana ny fiasan'ny ICP
Betsaka ny olona manontany tena hoe inona no hatao raha mijanona tsy tapaka ny ICP. Ny zavatra azo antoka indrindra dia ny mitsambikina tsy tapaka izy rehefa mampirehitra jiro ianao ary tsy nahazo ny herinaratra ilaina hamatsiana ireo fitaovana ampiasainao matetika. Amin'ity tranga ity, ny zavatra tsara indrindra dia ny fampitomboana ny herinaratra nifanarahana mba hisorohana ny fanapahana tsy tapaka ny famatsiana.
Ny mpaninjara herinaratra dia mamela fanovana herinaratra nifanarahana isan-taona. Noho io antony io no tsy maintsy hikajiantsika tsara hoe iza avy ny fahefana sahaza antsika sahaza indrindra ahafahana mitsitsy faran'izay betsaka amin'ny faktioran-jiro sy handany angovo sy vola. Ny mpanjifa tsy maintsy fantatrao amin'ny fotoana rehetra fa tsy maintsy mandoa hery ara-dalàna miaraka amin'ny mpivarotra ianao. Raha maniry bebe kokoa na latsaka ianao dia tsy maintsy manova ny drafi-karamao.
Raha te hampitombo ny herinaratra nifanarahana ny mpampiasa dia afaka mifandray amin'ireo mpivarotra eo an-tsena izay manome azy ny taha mora kokoa ary mifanaraka amin'ny toe-piainany. Izahay dia mieritreritra fa te hampitombo ny herinaratra elektrika saingy zavatra vitsivitsy ihany no nandiso ny ICP ara-potoana. Mety hamboarina fotsiny ny fomba fampiasantsika ny fitaovana alohan'ny hiovantsika hividy hery ambony kokoa. Ary io dia tsy hoe hitsitsy fotsiny amin'ny volavolan-dalàna isika fa hampidina karbônôzônia kely kokoa amin'ny atmosfera ary hampihena ny fanjifana angovo.
Ny fampitomboana ny herinaratra an-trano dia misy vidiny. Tokony ho takatra fa ny mpanjifa dia tsy maintsy mandoa ny mpaninjara ao amin'ny faritra misy azy io amin'ny alàlan'ny volavolan-dalàna momba ny herinaratra, izay mifanitsy amin'ireo zo manaraka ireto:
Zo fanitarana 17,37€/kW + VAT
Zon'ny fidirana 19,70€/kW + VAT
Zo an'ny fitambarana 9,04 € + VAT
Tsy maintsy atao ve ny ICP?
Misy trano sasany izay tsy manana ICP ao amin'izy ireo hatramin'ny taloha izay dia tsy voatery. Betsaka ny mety hitrangan'izany. Ny iray amin'izy ireo dia ny tsy fisian'ny ICP satria tsy voatery izany ary trano antitra izy io na satria tsy tianao ho tapaka na oviana na oviana ny famatsiana. Na ahoana na ahoana, ilaina ny manana an'ity fitaovana ity noho ireto antony manaraka ireto:
Miaro ny trano amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fametrahana ny herinaratra amin'ny hafanana be loatra noho ny fampiasana fitaovana elektrika be loatra miaraka amin'izay.
Mitahiry ny fametrahana raha sendra tsy fahombiazan'ny herinaratra. Tsy miaro antsika amin'ny lozam-pifamoivoizana na afo mety hitranga fotsiny io, fa manampy antsika koa hitahiry ny fametrahana manontolo raha sendra misy olana na lalan-kely.
Ny orinasan-tserasera dia afaka manonitra amin'ny tranga rehetra raha tsy manana ICP ao an-trano ianao. Amin'izany dia hanery handoa vola fanampiny izy izay hita taratra amin'ny faktioran'ny herinaratra eo ambany fiheverana ny sazy noho ny tsy fisian'ny ICP. Mety tsy manana an'io tranonao io ao an-tranonao ianao na satria trano efa taloha izy io ary tamin'izany fotoana izany dia tsy maintsy atao ny mametraka ilay fitaovana na raha tsy tianao ny hamonjy ilay jiro ary ho tapaka ny famatsiana.
Rehefa tsy manana jiro fanaraha-maso herinaratra ny trano dia azonao atao ny mandefa ny mpaninjara anao hametraka azy na hanao ny tenanao. Raha hofaina ny metatra dia ny mpizara izay miandraikitra ny fametrahana azy. Raha eo amin'ny fanananao ilay metatra dia tsy maintsy apetrakao amin'ny tenanao izany.
Miankina amin'ny fanapahan-kevitsika hametraka azy io na hasaina ny mpizara, dia hanana vidiny hafa izany. Raha te hametraka azy isika dia tsy maintsy manamboatra mpampita herinaratra ambany na orinasa fametrahana. Ny vidiny dia hiankina amin'ny marika an'ny mpanamboatra ICP. Vantany vao tafapetraka ny mpizara dia tompon'andraikitra amin'ny fanamarinana sy fifehezana ilay fitaovana izy io.
Safidy iray hafa mety hahasoa dia ny manofa ilay fitaovana. Vita amin'ny alàlan'ny mpaninjara izany ary tompon'andraikitra amin'ny fametrahana sy fanamarinana. Ny vidiny dia manodidina ny 0.03 isaky ny tsanganana.
Miankina amin'ny karazana trano ny fotoana ilana azy hanaovana fizahana amin'ny trano. Ny zavatra mahazatra indrindra dia ny fanatanterahana azy isaky ny 10 taona hanamarinana fa mandeha tsara ny zava-drehetra. Miankina ihany koa amin'ny fananan'ny vondrom-piarahamonina manodidina herinaratra napetraka mihoatra ny 100 kW.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny ICP sy ny mampiavaka azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » ICP